Inona avy ireo fitaovana azo zezika?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-12-19
Ny fahasimban'ny compostable dia ny fetran'ny biodegradation, ny fanondroana ny tontolo mikraoba, ny fotoana fanimbana, ny fenitra ary ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana. Ny Vondrona eropeana dia manana famaritana momba an'io, izay faritana ho "fitaovana azo zezika". Araka ny EN13432, co ...
Famaritana ny bioplastika: raha miorina amin'ny biolojika ny plastika dia faritana ho bioplastika, biodegradable, na izy roa ireo. Ny fototra biolojika dia manondro fa ny vokatra (ampahany) dia avy amin'ny biomassa (zavamaniry). Ny bioplastika dia avy amin'ny katsaka, fary na cellulose. Ny biodegradation ny bioplastics dia miankina amin'ny struc simika ...
Fampiharana mahazatra ny bioplastika asidra polylaktika
Fampiharana mahazatra ny bioplastika asidra polylaktika PLA tenany dia an'ny polyester aliphatic, izay manana ny toetra mampiavaka ny akora polymer ankapobeny, ny fahombiazan'ny fanodinana mekanika ary ny fihenan'ny ambany. Azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny plastika sentetika izy io. Ampiasaina be izy io hanamboarana pa ...
Inona no mahasamihafa ny simba, ny biodegradable sy ny compostable?
Ny plastika miorina amin'ny biolojika sy ny plastika biodegradable dia solon'ny tontolo iainana sy maharitra ho an'ny plastika nentim-paharazana izay vita amin'ny solika. "Degradable", "biodegradable" ary "compostable" dia teny izay matetika resahan'ny olona rehefa miresaka ...
Sarimihetsika mihinjitra biodegradable, Famonosana clod biodegradable, Kitapo azo zezika, Kitapo fako azo zezika, Kitapo fako tsy azo ovaina, Eco Cling Wrap Sugar Wrap,